मलेसियामा ७.१ बिलियन अमेरिकी डलर को कारखाना खोले पछि ९००० कामदार माग ! - jagritikhabar.com
मलेसियामा ७.१ बिलियन अमेरिकी डलर को कारखाना खोले पछि ९००० कामदार माग !
इन्टेल कोर्पोरेशन, विश्वको सबैभन्दा ठूलो चिप निर्माताहरू मध्ये एक, मलेसियामा यसको उन्नत उत्पादन क्षमताहरू विस्तार गर्न ७.१ बिलियन अमेरिकी डलर (RM ३० बिलियन भन्दा बढी) लगानी गर्दैछ।
“यस वर्ष समग्रमा अर्धचालक उद्योग विगत दुई-तीन दशकको तुलनामा बढ्नेछ। तर अझै पनि खाडलहरू ठूलो छन्,” उनले भने।
आजमिनले नयाँ लगानीले मलेसियाका लागि ४,००० भन्दा बढी इन्टेल रोजगारीका साथै ५,००० भन्दा बढी निर्माण कार्यहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने बताए।
“चिपको अभाव र विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रिकभरीबाट उत्पन्न हुने सम्भावित चुनौतिहरू द्वारा संचालित तेजीको विश्वव्यापी मागलाई ध्यानमा राख्दै यो उपक्रम साँच्चै समयसापेक्ष हो,” उनले थपे।
मलेसियाले विश्वव्यापी चिप प्याकेजिङ र परीक्षणको १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।